Tahriibayaal Soomaali iyo Afqanistaan Isugu Jira Oo Uu Tareen Ku jiidhay Wadanka Masadooniya
April 25th, 2015 Ruugcadaa
Afar iyo toban qof oo isugu jiray soomaali iyo afgaanistaan waxaa jiidhay tareen ku soconayey xawaare aad u sareeya, waxaanay xilligaasi dadkani iska dhex fadhiyeen wadada tareenku maro, oo ka mamnuuc ah in layska dhex fadhiisto.
Faysal Cali Waraabe Oo Ka Calaacalaya Wixii Ay Samaysteen, Xilli Doorasho Ku Sheegoodiina Sanad Dib Loo Dhigay (Daawo)
Faysal Cali Waraabe oo ah shakhsi ay dabaysha siyaasadeed marba docda u jihayso, wuxuu haatan ku soo toosay xilli dib loo dhigay doorasha ku sheegoodii, waxaanu hadalo aan munaasib ahayn kula dul dhacay kooxda yar ee ku hareeraysan Siilaanyo, wuxuuna ku tilmaamay kooxaha dhegaha furaysatay.
Wasiirka Gadiidka Duullista Hawada Iyo Saadaasha Ayaa Baaq Nabadeed U Diray Labada Beelood Ee Wada Dega Taleex (Video)
April 24th, 2015 Ruugcadaa
Wasiirka gadiidka duullista hawada sare iyo saadaasha Mudane Cali Jaamac Jangali iyo xildhibaano ka tirsan dawlada federaalka Soomaaliya waxay baaq nabadeed u direen walaalaha dagaaladu ku dhexmareen magaalada Taleex, kuwaasi oo ay ka faa’iidaysanayaan maamulada SSDF iyo SNM oo labadooduba ka soo horjeeda Maamul goboleedka Khaatumo state of somalia.
Wasiir Ku xigeenka Arrimaha Gudaha Abshir Cabdiraxman Oo dhagax Dhigay Saldhig Boolis Ay Yeelan doonto Magaalada Saaxdheer
April 23rd, 2015 Ruugcadaa
Wasiir Kuxigeenka Arrimaha Gudaha Mudane Abshir Cabdicasiis Shiikh Maxamuud ayaa isagu maanta dhagax dhigay Isteeshin Boolays uu yeelan doono Magaalada Saaxdheer. Sidoo kale munaasibadan waxaa ka qayb galay Gudoomiye K/xigeenka golaha Deegaanka Saaxdheer Mudane Astur oo isaguna sheegay in Qayb libaaxleh ay ka qaadan doonaan Dhismaha saldhig Booliis uu yeelan doono Magalada Saaxdheer.
Yaa Ka Dambeeya Colaada Laga Dhex Hurinayo Labada Beelood Ee Walaalaha Ah Taleexna Wada Dega?!!!
Inkastoo ay dhamayn karaynin waxyaabaha keenay inay labadan beelood ee walaalaha ah ee wada degta Taleex in ay mar walba soo noqnoqoto dhibaatada dhex taal, hadana waxaa la rumaysan yahay labada maamul ee SSDF Iyo SNM ay ka dambeeyaan, waxaanay ugu tala galeen inaysan marna degin degmada Taleex.
Gudoomiyaha Barlamaanka Khaatumo State Oo Ka Warbixinaya Cidda Ka Dambaysey Dilkii Saado Cali Warsame
Gudoomiyaha barlamanka Khaatumo state of Somalia Mudane Maxamuud Sheekh Cumar isaga oo lsaga oo kaashanaya xog uruurin buuxda oo uu sameeyey waxaa uu halkan ku soo bandhigayaa shirqoolkii lagu khaarajiyey Saado Cali Warsame oo uu ka dambeeyey. Waxaa kale oo uu gudoomiyuhu barlamaanka Khaatumo state of somalia uu tooshka ku ifin doonaa xawaalada Dhiigshiil oo isagu lug weyn kulaha khaarajintii ilaahay ha u naxariistee Saado Cali Warsame.
Maleeshiyaadkii Maamul Beeleedka SNM oo baxsad ku jirta
Mudooyinkii u danbeeyay waxaa baxsad aan hakad lahayn, kala shaki iyo dagaal ka dhex aloosan yahay, maleeshiyada maamul beeleedka SNM. Wararkii ugu danbeeyay ayaa sheegaya in ciidamo tiro badan oo kasoo jeeda Beesha Gudibiirsi ay kasoo digo rogteen maamul beeleedka Isaaq oo ay hore uga tirsanaayeen, haatana ay ku biireen ciidamada xaq u dirirka ee Suldaan Wabar
Doorashadii Maamul Beeleedka SNM Oo Lagu Dhawaaqay (Video)
April 21st, 2015 Ruugcadaa
Waxaa lagu dhawaaqay xilliga ay qabsan doonaan doorashooyinka ku sheegaa maamul beeleedka SNM, waxaanay ku tilmaansadeen 01/06/2016 waana xilliga la filayo inay doorashadii 2016ka ka dhacdo gebi ahaanba wadanka Soomaaliya, taasi oo ay hawsheeda gacanta ku hayaan beesha caalamka oo aad u danaynaysa wadanka Soomaaliya.
Odayo Dhaqameedyada Gobolka Cayn Oo Baaq Nabadeed U Diray Degmada Taleex(Video)
Odayaasha dhaqanka ee gobolka cayn waxay saaka baaq nabadeed u direen walaalaha wada dega degmada Taleex, in ay ilaashadaan nabada, wax walbana waxaa haboon in wada hadal lagu dhameeyo. Waxaanu sheegay Garaad Cabdirisaaq Garaad Soofe Duran, warkii u dambeyey ee aanu magaalada Taleex ka maqalnay wuxuu kii ahaa kii labada beelood ee walaalaha lagu heshiisiyey, wixii dhexdooda ahaydna lagu dhameeyey.
War deg dega Ah: Xiisad Colaadeed Oo Mar Kale Ka Bilaabantay Caasimada Taleex ee Khaatumo
April 21st, 2015 Wadani77
Sida aanu kulanayno wararka magaalada Taleex waxaa laysla dhex marayaa waxaa markale dib uga bilaababmay xiisadii u dhexeeysey beelaha walaalaha ah ee halkaasi dega. Ilaa haatana lama soo sheegin inay xabadu dhuunta ka baxday, waxaanuse rajaynaynaa in ilaahay kala qaboobiyo arrimaha u dhexeeya labada beelood ee walaalaha ah.
Gabay Lamagac baxay GURDANRAAC
April 20th, 2015 Wadani77
Dhagaystayaal waxaad halkan idiinku soo gudbinaynaa gabaygii Gurdanraac iyo abwaan Hurre Dabayl. Waa gabay u quusgoynaya raga reer Khaatumo ee wali rajo ka qabo maamulka Maxamuud Saleebaan. Sidaasi iyo dhagaysi wacan
Qarax ka dhacay Garoowe
April 20th, 2015 Ruugcadaa
Warar naga soo gaadhaya magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa sheegay in halkaasi uu ka dhacay qarax ismidaamin ah gaar ahaan xarunta UN-ta ee FAO.
Warar hor dhac ah oo aan la xaqiijin ayaa sheegaya dhimashada hal shaqaale oo ajanabi ah iyo dhaawacyo. Ma jirto cid wali sheegatay masuuliyada weerarkan, in kaska oo loo badinayo inay ka danbayso kooxda xag jirka ah ee Alshabaab.
Waa Sidee Xaalada Jaziirada Kudhaa Ee Dhawaan Laga Qaaday Alshabaab(Video)
April 18th, 2015 Ruugcadaa
Qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedka Juubaland ayaa soo booqday deegaankaasi oo dhawaan laga faramaroojiyey kooxdii alshabaab, hadaba muuqaalkan ayaan kagaga bogan doontaa xaaladaha dhabta ee halkaasi ka jira.
Ciidamadii Suldaan Wabar Oo Kaxaystey Baabuur U Shaqaynayey Maaliyada Boorame
April 16th, 2015 Ruugcadaa
Kooxda sida weyn u tababaran ee uu horkacayo Suldaan Wabar oo isagu dhawaan ku dhawaaqay inay gacantooda ku soo celin doonaan gobolka Awdal, waxay kaxaysteen baabuur u shaqaynayey wasaarad ku sheega maaliyada Boorame. Talaabadani waxay noqonaysa mid guul u ah ciidamada xaq u dirirka ee Suldaan Wabar, waana mid lagu diirsan karo.
Waxa Si Rasmi U Farmay Shirkii Maamul U Samaynta Gobolada Dhexe
Magaalada Cadaado ee Xarunta Maamulka Ximan iyo Xeeb waxa si rasmi ah uga furmay shirweynihii loogu tala galay maamul u sameynta gobalada Mudug iyo Galgaduud, Madashii shirweynaha waxaa ka hadlay madaxweynaha maamul goboleedka Ximan iyo xeeb, isna waxaa halkaasi ka hadlay Madaxwaynaha Galmudug Cabdi Xasan Cawaale Qaybidiid.
Masuuliyiin Ka Tirsan Dawlad Goboleedka Khaatumo Oo Sariibad Ka Hirgelinaya Magaalada Buuhoodle
Waxaa magaalada buuhoodle ee caasimada gobolka Cayn laga hirgelin doonaan sariibad cusub oo ay si weyn u intifaacsan doonaan shacabweynaha reer Buuhoodle. Waxaana dhagax dhigay mudane Abshir Cabdicasiis oo ah wasiirku xigeen wasaarada arimaha gudaha ee dawlad goboleedka Khaatumo state of somalia.
Waa faalo, waa yaab iyo amankaag
April 14th, 2015 Wadani77
Waxaad arkaysaa waxyaalaha bulshada Soomaaliyeed ku kala duwan tahay gaar ahaan kuwooda dega Puntland, Khaatomo State iyo kuwa dega galbeedka soomaaliya sida Burco iyo Hargeysa ama Soomaliland,
Qaramada Midoobay oo qaraar kasoo saaray dagaalka Yemen
April 14th, 2015 Ruugcadaa
Qaramada Midoobay ayaa qaraar kasoo saaray dagaalka ka socda wadanka Yemen. Ciidamada Xuutiyiinta ayaa lagu wargaliyay inay isaga baxaan dhulka ay haystaan.
Waraysi uu bixiyay Madaxweyne ku Xigeenka Dowlada Goboleedka Khaatumo – Video
April 13th, 2015 Ruugcadaa
Nala daawada waraysigan dhinacyada badan taabanaye ee uu bixiyay Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Khaatumo State of Somalia Md Cabdalla Caga Lulo
Dowlada Kenya oo sadex bilood UN-ta u qabatay in xerada Dadaab loo raro xuduuda Soomaaliya
April 12th, 2015 Ruugcadaa
Qoraal maalintii Sabtida kasoo baxay xafiiska madaxweyne ku xigeenka Kenya Md William Ruto wuxuu ku sheegay in ay UN-ta u qabteen sadex bilood inay 500 ee kun ee qaxootida Dadaab u raraan dhanka xuduuda Soomaaliya, isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi ” haddii kale anaga ayaa ka rareyna.
Xaflad Ballaadhan Oo Loo Sameeyey Boqorka Siciid Harti Oo Laguna Qabtay Minnesote -USA
Xafladan oo si weyn loo soo agaasimay laguna boqray Boqorka Siciid Harti Boqor Xuseen Axmed Cali, waana kan barnaamijkii oo dhamaystiran, sidaasi iyo daawasho haboon.
Dawlada Kenya Oo Tidhi Sadex Bilood Waa Xerada Qaxootiga Soomaalida Lagu Xidhaa
Inkastoo warkan sheegaya inay dawlada Kenya u qabatay sadex bilood kaga baxaan xerada qaxootiga ee dhadhaab oo ay haatan ku nool yihiin dad kor u dhaafay 600.000, misana waxaa ku kelifay kooxaha Alshabaab oo ay yidhaahdeen way ku soo dhuuntaan.
Niman Shiinays Ah Oo Magaalada Hargeysa Dagaal Gacan Ka Hadal Ahi Ku Dhexmaray
Wararka aanu ka helayno magaalada Hargeysa ayaa sheegaya kooxo shiinays ah oo si tuugo ah uga shaqaysta gudaha maamul beeleedka SNM oo faashash isla dhacay ka dib markii ay laba saf u kala baxeen.
Waxaa La Ogaaday Toonto Inay Dawo U Tahay Cuduro Tira Badan
April 11th, 2015 Ruugcadaa
Sida lagu qoray wargayska ka faalooda arimaha caafimaadka ee lagu magacaabo ‘Livestrong.com’, khubarada caafimaadku waxa ay sheegeen in toonta ay daawo u tahay cuduro fara badan oo ay ka mid yihiin:
Alla Maxaa Been La Isu Sheegayaa, Bal Dhuuxa Hadalka Wiilka Reerka Hargeysa Ee Muusa Biixi
Run ahaantii waxaa ayaandaro ah, wax aanu caqligu aqbali karin ah, in Kooxdan yar ee ka timi dhinaca Maamul Beeleedka SNM, markii ay ka quusteen ka soo hadh galeen ictiraafkii madax maray, waxay si qayaxan u bilaabeen inay koox yar oo ay Gambadhe ugu tageen maaweeliyaan, kuyee idinka ayaa haya ictiraafkiii…
April 10th, 2015 Ruugcadaa
Maxaa Ku Kelifay Ina Faroole Inuu Qudha Ka Jaro Hooyadiis?
Waxaan halkan idiin ku soo gudbin doonaa sababaha keenay Dilkii arxandarada ahaa ee uu Ina Faroole ku khaarajiyey hooyadiis Aamina Abiib, horta waxaa sidiisaba aad u xumaa xidhiidhka qoyska reer Faroole iyo gacanku dhiigle Cumar Faroole waxaanu ahaa mid waqti aad u dheer soo jiitamayey.
Dawlada Imaaraadka Carabta Oo Tababarsiin Doontaa Qaar Ka Mid Ah Askarta Madaxtooyada Soomaaliya
April 9th, 2015 Ruugcadaa
Safiirka dawlada imaaraadka carabta u fadhiya soomaaliya mudane Axmed Cismaan Alxumaadi wuxuu shaaca ka qaaday inay siin doonaan tababar la xidhiidha sugida amaanka madaxtooyada iyo wufuuda caalamiga ah.
Marwadii Madaxweynihii Hore Puntland Mr Faroole Oo Uu Dilay Wiil Ay Dhashay
Waxaa magaalada Garoowe laga soo sheegay wiil uu dhalay madaxweynihii hore ee Puntland Faroole inuu hooyadii rasaas qudha kaga jaray gudaha magaalada Garoowe, wiilka falkaasi foosha xun geysteyna waxa la dhaha Cumar cabdiraxmaan faroole.
Beesha Qorulugud Sidii Arxandarada Ahayd Ee Ay U Dileen Ninkii Xannuusanayey Ee U Dhashay Deegaanada Khaatumo State Of Somalia (DAAWO)
Beesha Qorulugud cadaawada ay u qabaan shacabweynaha reer Khaatumo waxaa cadaynaysa sidii arxan darada ahayd, ee ay u dileen ilaahay ha u naxariistee Cabdillahi Yuusuf Aw Cali oo aanu xiskiisu dhamayn. Arrintanina waxay noqotay mid tiiraanyo weyn ku abuurtay shacabka reer Khaatumo, hadaba nala daawada Weriye Ciro oo isagu warbixin ka soo diyaarshey.